Ummata gurraacha kuush keessaa ammoo Ummanni oromoo safuu Uumamaa fi Uumee isaatiif Eeguudhaan kan dhalootaa dhalootatti dabarsuudhaan asiin gaheedha. Uumamaa fi Uumee yoo jennu:-Uumamni...
Afaan OromoFebruary 22, 2019
Waa’ee Gadaa wantoota beekuu qabdan shan
Akkaataa waggaa dhalootaatiin gurmuu ykn murni ilmaan kormaa tartiibaan keessa dabran sadarkaa Gadaa jedhama. Sadarkaan Gadaa tokko waggaa saddeet qaba. Waggaa saddeet saddeettan kanaan...
Afaan OromoFebruary 9, 2019
Abbaan Gadaa yoo jaaru/ qorcaa yoo micciiru(du’u) eenyun bakka bu’a?
Akka Booranni jedhutti abbaan Gadaa angoorra jiru utuu baallii hin kennine yoo jaare, akka Gujiin himuttimmoo nami abbaa Gadaa ta’uuf deemu yookaa gadoomarra jiru...
Afaan OromoJanuary 29, 2019
Muramte – Murtii Araaraa
#Muramte - Murtii Araaraa akka sirna Gadaa Oromootti.
Afaan OromoJanuary 24, 2019
Afaan OromoJanuary 13, 2019